Quinazolines-APICMO mpamokatra CDMO
Products > Quinazolines
Quinazoline dia vondrona organika miaraka amin'ny formula C8H6N2. Heterocyclus aromatique izy io miaraka amin'ny rafi-pamokarana bicyclic izay ahitana karazana aromatika enina enina, bozenina ary peryrimidine. Izy io dia jiro miorina mavo mangamanga izay tsy mety levona ao anaty rano. Antsoina koa hoe 1,3-diazanaphthalene, ny quinazoline dia nahazo ny anarany avy amin'ny maha-derivative an'ny quinoline. Na dia ny sela kininina quinazoline aza dia tsy voatonona ao anaty boky ara-teknika, ireo solontenam-pasitera novonoina dia novaina ho tanjona medikaly toy ny mpitsabo anti-
Ny afatinib, antsoina hoe Boehringer Ingelheim, dia misy fanafody.
Erlotinib, zava-mahadomelina novokarin'ny Astellas, mba handraisana ny mararin'ny NSCLC amin'ny tumors vokatry ny fiovan'ny EGFR.
Ny lozika Lapatinib amin'ny glaxoSmithKline dia miady amin'ny kanseran'ny nono na metastatika miaraka amin'ny roche capecitabine.
Mampiseho ny rehetra 8 vokatra